Huawei FreeBuds 4, nnụcha nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa zuru oke [Nyocha] | Akụkọ Ngwa
Huawei FreeBuds 4, nnụcha nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa zuru oke [Nyocha]
Miguel Hernandez | 18/08/2021 12:00 | General, Nyocha
Na Ngwa Actualidad anyị na -ewetara gị ngwaahịa ọdịyo ọzọ, ị maara na anyị chọrọ ime ka ị mara akụkọ a na ọkwa niile, Huawei bụkwa otu n'ime ndị nrụpụta na -enye ụzọ ọzọ na ọkwa ọnụahịa dị iche iche. N'ịgbaso ihe ịga nke ọma nke FreeBuds 3, Huawei na -emezigharị ihe nlereanya ahụ wee mee ka ọ bụrụ nke zuru oke.
Chọpụta anyị Huawei FreeBuds 4 ọhụrụ, ekweisi ọhụrụ TWS nwere kagbuo mkpọtụ kacha arụ ọrụ. Anyị na-enyocha njirimara ya niile, ike ya na adịghị ike ya na nyocha a dị omimi, ị ga-atụfu ya? Anyị ji n'aka na mba, sonye na nyocha ọhụrụ a.
Ọ bụrụ na inyocha ọtụtụ nyocha ị ga -ahụ na ọtụtụ ndị nyocha kwenyere na Huawei ndị a FreeBuds 4 Ha bụ ekweisi kacha mma dị ọnụ ahịa n'ahịa mgbe anyị na-ekwu maka isi ekweisi mepere emepe, mana anyị nwere mmasị ịnye gị echiche nke anyị, maka nke a, anyị ga-anwale ha nke ọma… Ka anyị pụọ!
Ị masịrị ha? Zụrụ ha na mbelata ego ruru 20% na Amazon.
1 Ode ka mepee ekweisi
3 Ogo ụda na ndekọ ndekọ "hache-dé".
4 Nnwere onwe na onye nchịkọta akụkọ
Ode ka mepee ekweisi
Igwe isi ekwe ntị dị mma nke ukwuu, ọ dị mma nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị hapụghị ha, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere otu n'ime ntị ole na ole ndị injinia na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-echebara echiche mgbe ha na-eme ekweisi TWS ha, ha kacha mma maka ịrụ mma. kagbuo mkpọtụ na -arụ ọrụ. Huawei echebarala ndị ọrụ niile nwere ịkpọasị na ekwe ntị ntị ntị n'ihi na ha dara ma ọ bụ merụọ anyị ahụ, wee kpebie iji nka kagbuo mkpọtụ na-arụ ọrụ. Huawei FreeBuds 4, ọ fọrọ nke nta ka ọ dị ka nke Huawei FreeBuds 3 na imewe, nke m ji ezi obi na -eche dị ka naanị nhọrọ m. N'agbanyeghị nke a, na Podcast anyị na -arụkọ ọrụ na Actualidad iPhone, ị ga -enwe ike ịhụ na m na -eji Huawei FreeBuds 4i ruo ọtụtụ ọnwa, ihe atụ nke ọdịnihu (agaraghị m enye Huawei FreeBuds 3).
Dị na agba: White na ọlaọcha
Uwe mkpuchi silicone: Green, oroma, acha anụnụ anụnụ na oji
Site na njiri mara "mepere emepe", FreeBuds 3 a na -anọdụ na ntị, na -adaghị, na -anọpụ iche, na -enyeghị gị nsogbu. Anyị nwere akụkụ n'otu ntị ntị nke 41,4 x 16,8 x 18,5 mm maka naanị gram 4, mgbe ikpe ịchaji, nke gbagogogoro ka ọ dị ntakịrị karịa ụdị nke gara aga, na -anọ na 58 x 21,2 milimita maka gram 38 (mgbe ọ tọgbọ chakoo).
Nsonaazụ bụ nkasi obi a na -enwetụbeghị ụdị ya na ekweisi, na imewe n'ime igbe nke na-eme ka ọ bụrụ enyi nke uwe ogologo ọkpa ahụ nke anyị na-eyi taa, ọ naghị enye nsogbu, ejiri otu aka rụọ ya ngwa ngwa yana ịdị mma ya, dịka ọ na-adị na Huawei, kacha mma.
Agwawo m gị ọtụtụ ihe, ọ nweghịkwa ihe m gwara gị. Maka ọkwa dị elu nke klaasị anyị ga -enye usoro data na -atọ ụtọ, ka anyị kwuo maka njirimara teknụzụ. Anyị nwere Bluetooth 5.2, Huawei na -agba mbọ na ụdị kachasị ọhụrụ dị n'ahịa iji belata latencies ma melite njikọta. Dị ka ngwaọrụ FreeBuds ndị ọzọ anyị jikọtara site na mmeghe mmapụta, ya bụ, mmekorita akpaka na ngwaọrụ Huawei (EMUI 10 ma ọ bụ karịa), anyị na-eche na enwere mgbawa NFC amachibidoro.
Anyị nwere ọkwọ ụgbọ ala milimita 14,3 maka otu ọ bụla na -ekwe nkwa ụda dị elu, ekwe ntị ọ bụla nwere moto nke ya iji mepụta mkpọtụ ka ukwuu na diaphragm, nke a na -atụgharị gaa na bass nke ga -atọ ndị hụrụ egwu azụmahịa n'anya, emesịa anyị ga -ekwukwu gbasara ụdị ụda a. Ogologo ugboro, ekele maka onye njikwa LCP ruru 40 kHz, ya mere a na -eme ka osisi na ihe ndetu dị elu sikwuo ike.
Ogo ụda na ndekọ ndekọ "hache-dé".
Ogo ụda ya enweghị mgbagha, anyị nwere bass pụrụ iche (bass) Na ndị hụrụ egwu azụmaahịa dị obere ga -enwe ike ịnwe site na ngwa Huawei Life AI, dị maka gam akporo na iOS. Anyị nwere ụfọdụ ndetu n'elu na etiti nke kacha mma anyị detụrụ ruo taa, karịsịa na ekweisi mepere emepe, ebe ụda gburugburu ma ọ bụ mgbagọ nwere ike imebi ya. Huawei ejirila ụda ọdịyo nke ekwe ntị ndị a curl curl curl ma ọ bụrụ na anyị echee na ha 'mepere emepe', ihe ọ bụghị mmadụ niile ga -enwe ekele.
Dị ka Huawei achọghị ịhapụ ndị ọrụ na-agọnarị ekweisi ntị, o kpebiri ịnọgide na-arụ ọrụ na ọtụtụ ụdị ndị ọzọ gbahapụrụ ozugbo, si otú a na-enye anyị onyinye. ANC 2.0 nke na -ekwe nkwa ịkagbu mkpọtụ ruo 25db na -enweghị mkpa itinye rọba na -akpasu iwe na ntị anyị. Ebe ntị nke ọ bụla dị iche, ihe mmetụta na igwe okwu nke FreeBuds 4 ga -enyocha ma nye usoro nhazi nke na -enye ohere kagbuo mkpọtụ kacha mma.
O siri ike ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịmara ma ọ bụrụ n'ezie na a na -emezu nkwa ndị a niile n'otu oge, naanị ihe anyị nwere ike ikpe bụ kagbuo mkpọtụ, a na m ekwuwapụta n'atụghị ụjọ na ọ dị njọ nke kachasị mma etinyere na ekweisi 'mepere emepe, na ọtụtụ ihe dị iche. Ọ na -esiri m ike ịhụ nnyonye anya na ụda ọdịyo na kagbuo ya zuru oke maka iji ya kwa ụbọchị.
Ha nwekwara 48 kHz HD ndekọ ekele maka ụdị nhazi abụọ:
Gburugburu: Weta ụda gburugburu gị na stereo
Olu: Site na ịmata ugboro ugboro olu, ọ ga -anụcha ihe dị iche wee hapụ gburugburu ebe ndabere
O siri ike ịkọwa Ana m akwado ka ị lelee vidiyo Androidsis nke anyị na -eme nnwale ụda nke igwe okwu. Ị nwere ike ịzụta ha n'ọnụ ahịa kacha mma yana na -enweghị ụgwọ mbupu, echefula.
Nnwere onwe na onye nchịkọta akụkọ
Anyị nwere nnwere onwe zuru ezu nke awa 4 kwa isi okwu na ANC gbanyụrụ na Awa 2,5 na ANC na -aga. Site na ikpe zuru oke, anyị ga -erute na elekere 22 na -enweghị ANC yana awa 14 na ANC setịpụrụ. Nnwale anyị abịaruola nso na nnwere onwe nke Huawei nyere, nke na -ekwe nkwa ịkpọgharị awa 2,5 na naanị nkeji iri na ise. N'ụzọ doro anya, anyị nwere chaja ikuku (ọ bụrụ na anyị akwụkwuo euro 15 ...).
N'ụzọ dị otu a, a na -ahụ Huawei FreeBuds 4 dị ka nhọrọ kacha mma (site n'echiche m kacha mma) nke ekweisi TWS mepere emepe n'ihi ịdị mma, imepụta na ndakọrịta. A na -ere ha na Amazon, ị nwere ike ịzụta ha site na euro 119 (Ọnụ ego euro 149 na mbụ), yana webụsaịtị gọọmentị nke Huawei.
Ihe na: 18 August 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 8 Septemba nke 2021
Akụrụngwa, imewe, nkasi obi na nrụpụta
Nkagbu mkpọtụ ọrụ
A na -apịcha igbe ahụ ngwa ngwa
Nnwere onwe ka mma
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Huawei FreeBuds 4, nnụcha nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa zuru oke [Nyocha]
ILIFE H70, ihe nhicha ikuku enweghị eriri ị na -achọ
SPC Smartee Boost, smartwatch na ọnụ ahịa dị oke ọnụ